Kenya oo dalkeeda ka musaafurineysa 163 qof oo u dhashay Pakistan - Halbeeg News
NAIROBI (HALBEEG) – Dowladda Kenya ayaa magaalo madaxda Gobolka Xeebta ee Mombasa ku xirtay 163 qof oo u dhashay dalka Pakistan, kuwaas oo lagu soo eedeeyey inay qaab aan sharci ahayn dalka Kenya kusoo galeen.
Taliyaha Booliska Mombasa Noah Mwivanda, ayaa sheegay in dadkan lagu soo qabqabtay hawlgallo ka dhan ah soogalootiga sharci darrada ah oo ciidamada Gobolka Xeebtu wadeen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay.
Noah Mwivanda ayaa sheegay in 163da qof ee Pakistaniyiinta ahi u badan yihiin kuwo sharci darro ku yimid Kenya iyo kuwo ay ka dhaceen oggolaanshaha shaqaalenimadu kaddibna samaystay dukumiintiyo been abuur ah.
“Dadka lasoo xirxiray waxaa lagu helay inay sifo aan sharciyeysnayn uga shaqeysanayeen kala iibinta gawaarida ama inay ka shaqeynayeen aagagga laga dhoofiyo badeecadaha cashuur dhaafka loo sameeyo” Taliyaha Booliska Mombasa ayaa yiri.
Ugu dambeyntiina wuxuu sheegay in dhammaan dadka hawlgalkan lagu soo xiray loo musaafurin doona dalkooda hooyo ee Pakistan.
Hay’adaha ammaanka iyo kuwa socdaalka ee Kenya ayaa toddobaadyadii u dambeeyey wadey hawlgallo baahsan oo lagu bartilmaameedsanayo soo galootiga sharci darrada ah.